Home » Hack Ngwaọrụ » Gmail ikike Ngwá Ọrụ 15.4.1 – 100% Easy Hacking na 2 nkeji 2018 [kacha ọhụrụ]
site Emily Kenzie | January 3, 2018
Google akaụntụ hacking ngwá ọrụ bụ ihe kasị mma hacking ngwá ọrụ niile Google ngwaahịa. Ihe kasị mkpa na niile ọrụ ala bụ Gmail. E nwere ọtụtụ ijeri ọrụ nke Gmail akaụntụ. Gmail akaụntụ bụ ihe mgbasa ozi na-akwado email ọrụ Google na free. The ọrụ nwere ike ịmepụta otu akaụntụ Gmail na ike nweta a ala akaụntụ.
Gmail malitere dị ka ọkpụkpọ òkù-na-beta ntọhapụ na 1st April 2004, na ọ ghọrọ dị ka ọha na eze na 7th February 2007 ezie na ka na-beta ọnọdụ n'oge ahụ. Ozi ahụ kwalite si beta ọnọdụ na 7th July 2009 tinyere akụkụ ndị ọzọ nke Google Apps ụlọ. arụ ọrụ online, anyị na-akasị eme ka nza nke na-elekọta mmadụ akaụntụ.
Mgbe ụfọdụ mishap eme, na anyị na-echefu anyị akaụntụ paswọọdụ ma ọ bụ na-eju anya banyere echeta ya. N'ụzọ nke a, anyị na-enwe nza nke nsogbu na-data ọnwụ. Ma adịghị na-echegbu onwe anyị ugbu a nwere ebube ngwọta na-agbake gị Gmail akaụntụ paswọọdụ.
Ka m ịme ka ị ụfọdụ dị mkpa ụzọ na-agbake paswọọdụ gị. Ebe a na-nzà nke ụzọ mbanye anataghị Gmail Password, ma ha bụ ndị ezi oru. Olee otú Iji anataghị Gmail Password? E nwere ọtụtụ ụzọ anataghị Gmail Password, ma ha bụ ndị ezi oru. First Way bụ keylogging. Anyị otu nwekwara ike ike nke kacha mma wifi paswọọdụ hacker ngwá ọrụ niile ndị nwere wifi nke. Gbalịa WiFi paswọọdụ hacker maka free.
Olee otú Iji anataghị Gmail Password site keylogging Method?
Keylogging Usoro nke Gmail ikike Ngwá Ọrụ na-agụnye ojiji nke obere software akpọ isi-Logger. Mgbe a ọrụ installs nke keylogger na a nyere kọmputa, ọ ga-ewegharakwa bụla keystroke mesịa na keyboard plus Gmail. E nwere ọtụtụ ụdị nke isi-Logger software nke inweta maka free ma ọ bụ n'ihi na Ịzụ online, na mgbanwe degrees nke stealthiness.
Nzọụkwụ iji keylogger
Wụnye keylogger na iche na kọmputa.
Ọ ga-achọ nchịkwa ohere ka lekwasịrị kọmputa.
On ọtụtụ PC, paswọọdụ ga- “admin” ma ọ bụ ga-nnọọ ịbụ oghere.
The usoro maka wụnye keylogger dịgasị dabere ihe omume ị na-eji.
Malite keylogger ọrụ nke na ọ na akọwaputa ndekọ keystrokes.
Ị nwere ike hazi software na ndekọ igodo ma ọ bụrụ na ọ nwere otutu ọrụ.
Ka keylogger ọsọ mgbe lekwasịrị utilizes na PC. The keyloggers ga-eleghị anya weghara a ọtụtụ ozi.
Ị nwere ike iyo ha dabeere na window.
Ele ndekọ. Ole na ole keyloggers ga-eziga na ndekọ gị email.
Ndị ọzọ ga-achọ ka ị na mbupụ ha si PC na software na-agba ọsọ na.
Lee site na ndekọ ruo mgbe ị na-achọpụta ihe ị na-enyo na-zube si Gmail paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ndị keylogger anaghị zipuru ị na ndekọ via email, ị ga-mkpa iji nweta Gmail ikike Ngwá Ọrụ software na PC gị arụnyere na ya.
Ọzọ ụzọ mbanye anataghị ikike Gmail akaụntụ site phishing.
Olee otú Iji anataghị Gmail Password site phishing?
Ọzọ ụzọ mbanye anataghị ikike a Gmail paswọọdụ bụ site phishing. Ọ bụ a bit tricky ụzọ elu ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na ya. Phishing bụ a usoro igbochi mwute ozi dị ka okwuntughe, usernames na kaadị nkọwa.
Nanị phishing na-emekarị na-agụnye ojiji nke a spoofed Gmail page (ma ọ bụ a adịgboroja Gmail website) onye na nnyonye anya bụ fọrọ nke nta yiri ka na nke ukara Gmail website.When onye ọrụ na-agba mbọ na-abanye na site na nke a adịgboroja Gmail page na ụdị ha paswọọdụ, ndị ozi nbanye si na-zuru pụọ site hacker.
Phishing bụ a ụzọ igbochi mmadụ chebaara ozi dị ka okwuntughe, usernames na kaadị nkọwa. Nke a na Usoro na-emekarị na-agụnye ojiji nke a spoofed Gmail page ma ọ bụ a adịgboroja Gmail website .whose nnyonye anya bụ fọrọ nke nta yiri nke ukara na Gmail website.When onye ọrụ na-agba mbọ na-abanye na site na nke a adịgboroja Gmail page na ụdị ha paswọọdụ, ndị ozi nbanye si na-zuru pụọ site hacker.
Gmail ikike Ngwá Ọrụ Ịmepụta a adịgboroja nbanye page maka Gmail na-ewere ya online na-eme ka paswọọdụ ọma abụghị ihe dị mfe ọrụ. Ọ na-achọ ihe na-omimi oru ihe ọmụma nke HTML na scripting asụsụ dị ka PHP.
Olee otú Iji anataghị Gmail Password Site Gmail Hacker Ngwá Ọrụ?
Idebe ndị a niile ụzọ na uche na-atụle ha technical aspects.Our otu were a nzọụkwụ na-eme ka a pụrụ iche software maka anyị ọrụ na-agbake ha okwuntughe nke Gmail akaụntụ.
Ị nwere ike mfe ibudata Gmail paswọọdụ hacker software ma na-na akaụntụ gị natara Gmail hacking software nwere mepụtara a mgbanwe na ụwa nke Gmail paswọọdụ hacking. Anyị mere ka o kwe onye ọ bụla, n'ebe ọ bụla ọ nọ ọdụ na ụwa na-adị mfe mbanye Gmail okwuntughe ọbụna a na-abụghị oru ọrụ nwere ike inweta ohere a.
Ị na-ole na ole nzọụkwụ n'ebe na-a magburu onwe software. All i nwere ime bụ ibudata Gmail paswọọdụ hacker ma rụọ ọrụ ya. Ozugbo gị software na-arụ ọrụ, anọdụ azụ comfortably na-ahapụ gị niile erughị ala na software.
Anyị kere a software na akowaputara nzọụkwụ site nzọụkwụ Gmail hacking ntụziaka ka n'ihu aka ndị ka na-eche na gosikwara site aghọta isi ike aka na hacking a Gmail paswọọdụ ezie anyị software na-elekọta ihe niile site na onye ọ bụla nzọụkwụ nke usoro.
Soro ndị a mfe nzọụkwụ nyere n'okpuru maka Gmail ikike Ngwá Ọrụ. Anyị ekwe nkwa na ị ga-nweta gị Gmail akaụntụ hacking mgbaru ọsọ na mfe na oge oru oma n'ụzọ.
nzọụkwụ 1: Download Gmail Hack
Nzọụkwụ mbụ na onye ọ bụla nwere mmasị na-achọta a Gmail paswọọdụ ga-, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ọ na-banyere naanị agbake a echefu Gmail paswọọdụ ma ọ bụ mbanye anataghị ikike mmadụ Gmail akaụntụ.
Na mbụ, ị nwere ibudata Gmail Password Hacker site na ịpị download bọtịnụ nyere na anyị ukara saịtị. The download usoro ga-amalite, na n'ime sekọnd ị ga-enweta gị multitasking software .Mgbe ndị download zuru ezu ego ozugbo, mgbe n'ihu kwụpụ 2.
nzọụkwụ 2: Wụnye Gmail Password Hacker
Mgbe nbudata zuru ezu abụọ-pịa na nwụnye faịlụ nke Gmail ikike Ngwá Ọrụ, ị dị nnọọ ebudatara na-ebute na nwụnye usoro.
Ugbu a Soro mfe nzọụkwụ site nzọụkwụ ntuziaka nwụnye nke software ga onwe ya na-eduzi you.Until ịwụnye zuru ezu, echela na PC anya. Ozugbo ọ niile mere, i nwere ike n'ihu na-kwụpụ 3.
nzọụkwụ 3: Main Control Panel Introduction
Mgbe Gmail Password, Hacker na-ọma arụnyere na kọmputa gị. Ugbu a abụọ-click na gị òké na shortcut kere na gị na desktọọpụ. Ọ ga-emezu ihe e kpere software, na ya bụ isi interface ga ekele unu.
Na-ebute na Gmail hacking usoro, ị ga-ozugbo input n'ime gosiri n'ọhịa email address ị chọrọ anataghị ikike na pịa na "Dịghachi Password" button. The Gmail paswọọdụ hacking usoro amalitela!
nzọụkwụ 4: Gmail Hack bụ Complete
Mgbe a nkeji ole na ole, ị ga-enwe ike inwe gị iche Gmail akaụntụ paswọọdụ. Ugbu a, i nwere ike jiri ya erughị ala free.
Akụkụ nke Advanced Gmail Password ikike Ngwá Ọrụ
Easy Jiri: Gmail paswọọdụ hacker bụ a pụrụ iche software mfe iji na software. Ọbụna-amụta na ụzụ na nkà na-chọrọ maka ndị dị otú ahụ software nke bụ ike iji. Ọ bụ ya mere Gmail Password Hacker kere na mfe interface, na ọ na-eduzi ya ọrụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ruo mgbe mkpuruedemede paswọọdụ ọma natara!
Fast na-arụ ọrụ: Ọtụtụ n'ime Gmail hacking ngwaọrụ ma ọ bụ ụzọ mbanye Gmail okwuntughe achọ ụbọchị mbanye akaụntụ email. Gmail Password Hacker software ike ịgbawa a Gmail paswọọdụ na nkeji. Ọ na-eji pụrụ iche usoro iji kpokọta ozi nke akaụntụ gị n'ime minutes.Very obere ọ na-ewe oge dị ka 2or 3 mins naanị na okwu ahụ siri.
Echebe gị Nzuzo: One na ọtụtụ ndị anaghị ma oké egwu akụkụ nke Gmail paswọọdụ hacking na-eme n'aka na gị njirimara tọrọ zoro mgbe hacking mmadụ Gmail paswọọdụ. Ma Gmail ikike Ngwá Ọrụ adịghị ihe ọ bụla dị otú ahụ nke ekele na elu email hacking technology. Ọ ana achi achi gị njirimara bụ 100% echebe site na 3rd otu na-eme ka gị PC secure.Moreover, ọ na-eme gị niile arụ ọrụ na-ezo na ala si na-tọrọ atọ ma ọ bụ achọpụtara.
Ọ bụ Free: Ọ bụ free nke na-eri, ma ọ dighi zoro ezo ebubo na-nọgidere na-enwe. Kasị nke Gmail paswọọdụ hacking ọrụ na-ana a hefty ego maka ha email hacking ngwọta. Our team has decided to make Gmail Password Hacker readily available to everyone.That’s why it’s available for free download to anyone in need of a fast, mfe ma free ụzọ mbanye anataghị ikike Gmail okwuntughe!
Olee otú Iji Jiri Gmail Password Hacker?
Mepee elu Gmail Password Hacker Crack na nchekwa ma wụnye asosetup.exe
Kwupu netwọk gị Connection & Tapawa gbawara faịlụ na software echichi directory.
Download Gmail Hack Tool 15.4.1 – 100% Easy Hacking na 2 nkeji 2018 [kacha ọhụrụ]
← Advanced System Optimizer v3.9.3636 Crack Driver Toolkit 8.5.1 License Key + 100% Full Version arụ ọrụ Crack 2018 →
7 echiche on "Gmail ikike Ngwá Ọrụ 15.4.1 – 100% Easy Hacking na 2 nkeji 2018 [kacha ọhụrụ]”
N'ihi nke ukwuu
Awesome, N'ihi nke ukwuu maka nke a.
hey! Daalụ maka a 🙂
Ekele a ton nke a.
Chaị! Nke a bụ egwu 😉 10/10
Hi, M bịara gị Gmail ikike Ngwá Ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ zuru okè, N'ihi a otutu maka kwesịrị nkekọrịta.
uhie uhie Hob January 5, 2017
yoo! Daalụ maka The Gmail hacker 🙂